Christian Music Video | मेरो घर कहाँ छ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मेरो सानो कागज र ब्रुशले, म एउटा सानो घरको चित्र रड्गाउँछु।
मामु घरभित्र, बुबा पनि भित्र हुनुहुन्छ।
मेरी दिदी र म दिउँसोको घाममा खेलिरहेका छौं।
सूर्य हामीमाथि चम्किँदा, हामी सबैले न्यानो महसुस गर्छौं।
मामु मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ, बुबा पनि मुस्कुराउनुहुन्छ।
दिदीबहिनी रमाइरहेका छन्, हामी सबै खुशी छौं।
यहाँ यो मेरो परिवार हो, मेरो कागजमा चित्रित गरिएको।
मेरो सपनामा भएको तस्वीर। यो सबै मेरो सपनामा छ।
वेन्या, आमा केही दिनको लागि व्यस्त रहनेहुनेछ।
त्यसैले तिमी काकाको घर जानेछौ र ड्यापेंगसँग खेल्नेछौ, हुन्छ?
नाइँ, म नजाने।
म तपाईं र दिदीसँग यहाँ बस्न चाहन्छु।
मेरो सानो सुटकेस उठाउँदै, म अनौठो ठाउँमा जाँदैछु।
बुबाचाहिँ भित्र हुनुहुन्छ तर मामु बाहिर।
मेरो सानो सुटकेस उठाउँदै,
म एउटा घर जाँदैछु जुन घरलाई म कुनै समय चिन्थेँ।
मामुचाहिँ भित्र हुनुहुन्छ तर बुबाबाहिर।
मेरो सुटकेसमा जोडले समात्दै, म सडकहरूमा भौँतारिरहेछु।
एकलोपन महसुस गर्दै, कहाँ जाने थाहा छैन।
मेरो सानो सूटकेस मात्रै मेरो साथी छ यहाँ।
यो घर मात्रै मेरो हो, जहाँबाट म भाग्न सक्दिन।
मेरो घर कहाँ छ? ओहो यो कहाँ हुन सक्छ?
यस्तो ठूलो संसारमा, तर मेरो लागि कहीं छैन।
कसले मलाई मेरो सपनाको घरमा पुर्‍याइदिन सक्छ,
मेरो चित्रमा भएको घर, मेरो सपनाको घर?
यस्तो ठूलो संसारमा, मेरो लागि अझै कुनै घर छैन।
कसले मलाई आरामदायक घर, मेरो चित्रमा भएको घर,
मेरो सपनाको घर, मेरो सपनाको घर दिन सक्छ?
यहाँ, मेरो एउटा घर छ। मेरो एउटा घर छ।
तर यो मेरो कागजमा कोरेको घर होइन।
यो मेरो सानो सूटकेस होइन, यो त त्यो ठाउँ हो जुन मैले सपनामा देखेको थिएँ।
आमा र बुबा भित्र हुनुहुन्छ, मेरी बहिनी र म पनि।
यो त्यो घर हो जहाँ हाम्रो आत्माले अन्तत: आराम गर्न सक्छ,
महिमाले भरिएको घर, महिमा र आशाले भरिएको।
यो महिमाले भरिएको घर एउटा घर हो,